Białystok dia tanàna any Polonina, fanta-daza lavitra noho ny sisintaniny noho ny fividianana tsena. Eto, ny vidin'ny vidin-javatra amin'ny zava-drehetra - avy amin'ny akanjo mankany amin'ny fitaovana ao an-trano, izany no mahatonga ny mpividy avy any Litoania, Letonia, Okraina, Belarosia ary Rosia miezaka hatrany.
Ny vidiny ambany, ny tahiry mahasoa, ny fivarotana sy ny fihenam-bidy amin'izao fotoana izao - izany rehetra izany no mahatonga an'i Białystok sariaka amin'ny fividianana. Ankoatra izany, ny ankamaroan'ny entana - avo lenta.
Talohan'izay, nampiharina tamin'ity Okrainiana ity ity hevitra ity izay te-hiampita sisintany Poloney-Okrainiana ho an'ny tanjon'ny fividianana. Tsy sarotra ny nahazo visa toy izany.
Saingy hatramin'ny tamin'ity taona ity, nanamafy ny fitsipika momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny Okrainiana ny manampahefana Poloney - amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'ny fahazoan'ny visa Schengen tsotra ny dingana. Hatramin'izao dia tsy mora ny manao dia an-dalamby mankany Polonina ary indrindra indrindra an'i Bialystok.
Na dia izany aza, ho an'ny Rosiana, ny lalàna ihany koa dia mahazo ny fahazoan-dàlana hivezivezena mankany Polonina - mba hahazoana visa amin'ny volana aprily amin'ny taona hoavy dia mila mandrindra ny fizotry ny biometrika ny mponina rehetra ao Rosia.
Fialam-bidy tsara indrindra any Polonina
Raha mbola vitanao ny hizotra ho any Bialystok, mila mialoha mialoha ny hiantsena ianao. Manolotra safidy maro ireo trano fandraisam-bahiny marobe, izay ahitan'ny vahiny sy ny polisy ihany.
Ity toerana ity dia mitarika eo amin'ireo toerana lamaody mividy any Bialystok. Ny foibem-barotra lehibe indrindra dia miorina ao afovoan-tanànan'i Bialystok ary manome mpitsidika ho an'ny mpitsidika mirefy 150 eo ho eo amin'ny akanjo, fitaovana ho an'ny ankizy, lambam-bolo, akanjo hoditra, akanjo. Ity toerana ity dia tena tsara ho an'ny fiantsenan'ny fianakaviana.
Tena fivarotana lehibe sy fialam-boly ao an-tanàna izy io, ao amin'ny faritaniny misy birao maro misy akanjo sy kiraro lamaody, fitaovana ho an'ny ankizy sy fanatanjahantena, fitaovana ao an-trano, trano fisakafoanana, cafés, billiards, bowling , cinema. Amin'ny teny iray dia misy ny zavatra rehetra ho an'ny vatana sy ny fanahy.
Eto, eo ambany tafo iray, misy mpivarotra manodidina ny 150 eo amin'ireo mpivarotra poloney izay mpikambana ao amin'ny fikambanana. Ny fivarotana tsirairay dia manana fidirana mivantana avy eny an-dalambe. Amin'ny ankapobeny, ny foiben'ny mpivarotra dia orinasa fivarotana manodidina ny loharano iray.
Ao amin'ny tsena, araka ny mahazatra, dia mora kokoa ny vokatra rehetra. Ny karazana dia tena tsara, raha tianao, dia afaka mahita ny akanjo akanjo tsara tarehy sy ny entam-barotra. Rehefa mandehana ity toeram-pivarotana ity dia eritrereto ny toetry ny toetrandro (maro ny fivarotana tsy mandeha amin'ny andro ratsy), ary aza adino fa misokatra hatramin'ny 13-00.
Polisy mavo - inona no tokony harahina ary ahoana no fomba hamoronana sary hoso-doko?
Diso fanantenana amin'ny olona
Entresol ao amin'ny lalantsara
Kitapom-bary tsy misy atody
Ahoana no hamaritra ny taonan'ny sokatra tany iray?
Cream for acne - fanombana ny fanafody tsara indrindra sy fanafody an-trano
Fiofana fiara any Sipra - Ayia Napa
Kitendry hitsidika zazalahy kely
Vavaka ho an'ny fiarovana ny fianakaviana
Ahoana no iantsoana an'i Ben ilay lehilahy maty?
Ny gymnastics fanatanjahantena ho an'ny tarika zokiny zandriny
Ahoana ny fomba handraisana ny karaoty?